Bible Mu Nsɛm Ɔkɔɔ Ɔdan a Wɔatom Mu - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Assamese Ateso Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bicol Bislama British Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cinyanja Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Czech Czech Sign Language Dangme Danish Drehu Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Estonian Sign Language Ewe Faroese Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language French French Sign Language Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Japanese Sign Language Jula Kabardin-Cherkess Kabiye Kabyle Kachin Kannada Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lugbara Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mende Mexican Sign Language Miskito Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nicaraguan Sign Language Niuean Norwegian Nuer Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Rarotongan Romanian Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen (Cyrillic) Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Ukrainian Umbundu Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Wolof Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
BERE a Petro ne Yohane fii ɔda a wosiee Yesu wɔ mu no so no, ɛkaa Maria nkutoo wɔ hɔ. Ofii ase sui. Afei ɔbɔɔ ne mu ase hwɛɛ mu, sɛnea yehui wɔ mfonini biako no mu no. Ohuu abɔfo baanu wom! Wobisaa no sɛ: ‘Dɛn nti na woresũ?’
Maria buae sɛ: ‘Wɔafa me Wura, na minnim faako a wɔde no akɔto.’ Afei Maria dan ne ho, na ohuu ɔbarima bi. Obisaa no sɛ: ‘Hena na wohwehwɛ no?’
Maria susuwii sɛ ɔbarima no ne turom hɔ hwɛfo no, na ebia ɔno na wayi Yesu amũ no afi hɔ. Enti ɔka kyerɛɛ no sɛ: ‘Sɛ woafa no afi ha a, kyerɛ me baabi a wode no akɔto.’ Nanso na ɔbarima no yɛ Yesu. Na wafa nipadua a Maria ntumi nhu no. Nanso bere a ɔbɔɔ Maria din frɛɛ no no, ohui sɛ ɛyɛ Yesu. Enti otuu mmirika kɔka kyerɛɛ asuafo no sɛ: ‘Mahu Awurade!’
Akyiri yi, saa da no ara, bere a asuafo baanu nam rekɔ akuraa bi a wɔfrɛ no Emaus ase no, ɔbarima bi bɛkaa wɔn ho. Na asuafo no werɛ ahow efisɛ wɔakum Yesu. Nanso bere a wɔnam rekɔ no, ɔbarima no kyerɛkyerɛɛ wɔn nneɛma pii fii Bible mu a ɛmaa wɔn werɛ kyekyee. Akyiri yi, bere a wɔsoɛɛ baabi redidi no, asuafo no hui sɛ ɔbarima no yɛ Yesu. Afei Yesu yerae, na asuafo baanu no yɛɛ ntɛm san kɔɔ Yerusalem sɛ wɔkɔbɔ asomafo no amanneɛ.
Bere a eyi rekɔ so no, Yesu yii ne ho adi kyerɛɛ Petro nso. Afoforo no nso ho peree wɔn bere a wɔtee no. Na asuafo baanu yi kɔɔ Yerusalem kohuu asomafo no. Wɔkaa sɛnea Yesu yii ne ho adi kyerɛɛ wɔn wɔ kwan no so no ho asɛm. Na bere a wogu so reka eyi ho asɛm no, wunim anwonwade a esii?
Hwɛ mfonini no. Yesu bepuee dan mu hɔ ankasa, ɛwom sɛ na wɔato pon no mu de. Anigye bɛn ara na asuafo no nyae! So ɛno nyɛ anigye da anaa? Wubetumi akan mpɛn dodow a Yesu ayi ne ho adi akyerɛ n’akyidifo de bedu saa bere yi? Wunyaa mpɛn anum?
Na ɔsomafo Toma nni hɔ bere a Yesu bae no. Enti asuafo no ka kyerɛɛ no sɛ: ‘Yɛahu Awurade!’ Nanso Toma kae sɛ gye sɛ ɔno ankasa hu Yesu na wagye adi. Nnawɔtwe akyi no asuafo no hyiaa ɔdan bi mu bio a na wɔato pon no mu, na saa bere yi de na Toma ka wɔn ho. Mpofirim ara Yesu puee dan mu hɔ. Afei de Toma gye dii.
Dɛn na Maria ka kyerɛɛ ɔbarima bi a osusuwii sɛ ɔyɛ turom hɔ hwɛfo no, nanso dɛn na ɛma ohui sɛ ɛyɛ Yesu ankasa?
Dɛn na asuafo baanu a wɔnam rekɔ akuraa bi a wɔfrɛ no Emaus no hui?
Anwonwade bɛn na esii bere a asuafo baanu no reka akyerɛ asomafo no sɛ wɔahu Yesu no?
Mpɛn ahe na Yesu ayi ne ho adi akyerɛ n’akyidifo no?
Dɛn na Toma kae bere a ɔtee sɛ asuafo no ahu Awurade no, nanso dɛn na esii wɔ nnawɔtwe akyi?
Kenkan Yohane 20:11-29.
So na Yesu reka wɔ Yohane 20:23 sɛ wɔama nnipa tumi sɛ wɔmfa bɔne nkyɛ? Kyerɛkyerɛ mu. (Dw. 49:2, 7; Yes. 55:7; 1 Tim. 2:5, 6; 1 Yoh. 2:1, 2)
Kenkan Luka 24:13-43.
Yɛbɛyɛ dɛn atumi asiesie yɛn koma ma agye Bible mu nokware atom? (Luka 24:32, 33; Esra 7:10; Mat. 5:3; Aso. 16:14; Heb. 5:11-14)